Aljeeriyaan filanoo prezidaantummaa geggeessuuf yeroon baatii lamaa gadii hafee jiru kanatti kanneen prezidaant Abdul Aziiz Botefliikaa marsaa shanaffaaf akka hin dorgomne morman daandiitti ba’uun mormii dhageessisaa jiran. Maanguddoon waggaa 82 yeroo ammaa dhibee onneen dhukkubsataa kan jiran yoo ta’u weelcheerii irra ta’anii deemu.
Kanneen prezidaanticha morman magaalaalee gurguddoo kan akka Aanbaa fi Ooraan irratti ba’anii mormii dhageessisaa jiran. Mormiin kun magaalaalee xixiqqoo kanneen biroo keessatti illee geggeessamuun gabaasamee jira.
Sabaa himaan Arabaa viidiyoo poolisiin hiriirtota bitimsuuf gaazii imimmaansu biifu mul’isee jira. Balaa hamaan dhaqqabe garuu hin gabaasamne.
Muummichi ministeeraa Ahimad Ouyaahiyaa haasaa paarlaamaaf Wiixata kaleessaa dhageessisaniin akka jedhanitti angawoonni hiriira sana hanga kan nagaa ta’etti hin morman. Botfilikaan erga bara 1999 qabee aangoo irra kan jiran yoo ta’u akka waajjirri isaanii jedhetti dilbata galgala wal’aansa fayyaaf gara swiizerlaanditti imalaniiru. Deggerisi pdrezidaantichaaf jiru ennaa bara 2014 isaan prezidaantummaaf erra deebi’uun dorgoman caalaa amma cimaa dha jechuu dhaan hoogganaan duula filannoo prezidaantichaa fi muummichi ministeeraa duraanii Abdul Maleek al Sallaal ibsaniiru.
Haa ta’u malee haalli yeroo ammaa jiru wal xaxaa fi to’annaa ala jiraachuu xiinxaltoonni ni dubbatu. Marsaa hojii prezidaant Botfliikaa ilaalchisuun angawoota biyyattii ijoo, dhaaba tajaajila tika nagaa, waraana biyyattii poolisii fi deggertoota przidaantichaa gidduu falmiin jiraachuun gabaasameera.